XOG: Maxaa kala qabsaday Rooble iyo Wasiirada taageersanaa Farmaajo? (Shirkii Golaha Wasiirada) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. XOG: Maxaa kala qabsaday Rooble iyo Wasiirada taageersanaa Farmaajo? (Shirkii Golaha Wasiirada) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
RW Rooble oo soo nooleeyay xiriirkii Somaliya iyo Imaaraadka, kuna dhawaaqay in loo celinayo Lacagtii..
Xukuumadda Somaliya oo Imaaraadka Carabta kala wareegtay Deeq loogu talogalay Abaaraha
Ergaygii Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsanaa Geeska Afrika oo si lama filaan ah Xilka uga tegaya
Ganacsade Soomaali ah oo lagu dilay Dalka Koonfur Afrika iyo mid kale oo la dhaawacay
Hay’adda NISA oo Warbixin La-yaab leh kasoo saartay Xaaladda Maxbuus Mukhtaar Roobow (Akhriso)
Guddoomiye cusub oo loo doortay Guddiga Doorashada Heer Federaal (FEIT) iyo sida uu kusoo baxay
Yaa ku guuleysan doona Xilka Guddoomiyaha Guddiga Doorashada FEIT..? (Farmaajo Vs Rooble)
XOG: Maxaa lagu helay Wasiirka Ganacsiga? (Heshiis uu la wareegay iyo Baaritaan lagu bilaabay)
Somaliya oo bixin weyday Qaaraankii Q/Midoobay (Sidee loogu ogolaaday inay sii lahaato Codeynta..?)
Hanti-dhowrka Guud oo 4 Wasaarad ku amray joojinta heshiisyo Sharci Darro ah (Akhriso Go’aan Culus)
XOG: Maxaa kala qabsaday Rooble iyo Wasiirada taageersanaa Farmaajo? (Shirkii Golaha Wasiirada)
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa si adag uga hadlay isku daygii Maxamed C/llaahi Farmaajo ee shaqo ka joojinta iyo ciidamadii la wareegay xafiiskiisa.
Kulankii Golaha Wasiirada ee xalay ayuu Rooble si kulul u canaantay xubnaha Golaha Wasiirada, isagoo weydiiyay go’aankii ay ka qaateen wixii ka dhacay xafiiskiisa iyo kan Golaha Wasiirada, wuxuuna si cad ugu sheegay in wasiir kasta ay waajib ku ahayd inuu difaaco duullaankii lagu soo qaaday Xukuumadda.
Ra’iisal wasaaraha ayaa ku goodiyey inuusan ka hari doonin madaxweynihii hore Maxamed C/llaahi Farmaajo ayna sharciga ku kala bixi doonaan, wuxuuna amray inay Golaha Wasiirada soo saaran Go’aan lagu cambaareeyo falkaasi, isaguna magacaabi doono Guddi baaritaan.
Wasiiradii taageersanaa Farmaajo oo la filayay inay shirka hadlaan ayaa qaaday tallaabo lama filaan ahayd markii auy ka gaabsadeen inay shirka ka hadlaan ama Ra’iisal wasaaraha hadal kusoo celiyaan.
Dhinaca kale wasiiro isku dayey waanwaan ay ka dhex sameeyaan Farmaajo iyo Rooble oo uu ka mid yahay Ra’iisal wasaare ku xigeenka ayaa iyaguna ka aamusay go’aanka adag ee Ra’iisal wasaaraha, waxayna dhammaantood qaateen go’aan ayna isla ogeyn oo ah inay aamusaan.
Go’aankii uu soo jeediyey Ra’iisal wasaare Rooble ee cambaareynta falkii uu ku kacay Farmaajo iyo Guddi baaritaan oo ayey Shirkaasi ku ansixiyeen Golaha Wasiirada, iyadoo wasiirada qaarkood laga dareemi karo inay xaaladda raali ka ahayn.
Previous articleMatt Bryden: “Farmaajo go’doon ayuu ku jiraa, maalmo ayuun ku bixi doonnaa, haddii aanay dhicin..”
Next articleXukuumadda Rooble oo shaacisay inuu Lafa-gareen ka qeyb galayo Shirka Muqdisho
RW Rooble oo booqday dhaawaca Afhayeenka Xukuuumadda (Sawirro Muuqaalka Macalimuu)
Muxuu yahay Kursiga lagu eedeeyay inuu Ra’iisal Wasaare Rooble kala wareegay Beeshii lahayd..?
Odayaasha Muqdisho oo ku dhawaaqay xilliga loo cayimay bannaanbaxa ka dhacaya Muqdisho
Sidee loo fuliyey Qarixii Is-miidaaminta ee lagu beegsaday Afhayeen Macalimuu? (Sheegashada Alshabaab)
Alshabaab oo shaacisay Magaca iyo Beesha uu kasoo jeedo Ninkii isku Qarxiyey Muqdisho
EXCLUSIVE January 16, 2022
Wararkii ugu danbeeyay ee xaaladda Afhayenka Xukuumada oo ku dhaawacmay Qarax is-miidaamin ah